Shaqaale ajnabi ah oo katirsanaa UNICEF oo Muqdisho lagu dilay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShaqaale ajnabi ah oo katirsanaa UNICEF oo Muqdisho lagu dilay
January 26, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Sumada haayada UNICEF.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal sare oo ajnabi ah oo la shaqeynayay haayada UNICEF xafiiskeeda magaalada Muqdisho ayaa galabta oo Jimce ah lagu dilay Muqdisho, sida ay sheegeen haayadaha ammaanka.
Dilka ayaa waxaa geystay nin Soomaali ah oo ilaaliye ka ahaa haayada kaasoo shaqada laga ceyrshay.
Ninka dilka geystay ayaa baxsaday kadib toogashada oo ka dhacday xarunta haayada UNICEF ee gudaha Muqdisho,
Sargaalka la dilay ayaa u dhashay dalka Uganda, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Ciidamadda ammaanka ayaa yimid goobta uu dilku ka dhacay waxayna bilaabeen baaritaan.